''ဇာတ်လမ်းတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုက မတူညီပေမယ့် အားထုတ်ကြိုးစားရတဲ့ အပိုင်းတွေကတော့ အတူတူပါပဲ'' ဒါရို?? - Yangon Media Group
”ဇာတ်လမ်းတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုက မတူညီပေမယ့် အားထုတ်ကြိုးစားရတဲ့ အပိုင်းတွေကတော့ အတူတူပါပဲ” ဒါရို??
ပရိသတ်တွေက အချစ်ဇာတ်ကားမှ ဟာသဇာတ်ကားမှဆိုတာ ထက်ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးကို ပိုမိုကြိုက် နှစ်သက်တာကြောင့် ဘယ်ဇာတ် လမ်းမျိုးကိုပဲရိုက်ရိုက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားအားထုတ်ပြီး ရိုက် ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဒါရိုက်တာ သြရသက ပြောပါတယ်။
”ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့ အခုလက်ရှိမှာ ပရိသတ်တွေက ဟာသဇာတ်မှ၊ အချစ်မှ၊ အက်ရှင်ဇာတ်မှ ပိုကြိုက်တယ်ဆိုတာထက် တကယ်ဇာတ်လမ်း ကောင်း၊ ဇာတ်အိမ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားကို ပရိသတ်တွေ ပိုစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့က ဘယ်ဇာတ်ကိုမဆို ပိုကောင်းအောင် ကြိုးစားရင်တော့ ပရိသတ်တွေ ပိုလက်ခံလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ရှေ့ဆက်ပြီး တော့လည်း ရိုမန့်စ်၊ ဟာသ၊ ဖြစ်ရပ်မှန်ဘဝသရုပ်ဖော်စတဲ့ ဇာတ်မျိုးစုံကိုဆက်လက်ရိုက်ကူးသွားမှာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဇာတ်ကား တွေ အစုံရိုက်ပါတယ်။ များတာကတော့ ဟာသဇာတ်ကားတွေများပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုက မတူညီပေမယ့် အားထုတ်ကြိုးစားရတဲ့အပိုင်းတွေကတော့ အတူတူပါပဲ”လို့ဆိုပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ကူးမှုများအပေါ် မေးမြန်းမှုကိုလည်း ယခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ”ကျွန်တော်နောက်ဆုံးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲကတော့”မင်္ဂလာရှိတဲ့အရပ်” ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကိုရိုက်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဇာတ်လမ်းတွဲအနေနဲ့ကတော့ ”မင်္ဂလာရှိတဲ့အရပ်”ရယ်၊ ”ရွှေမိုးငွေ မိုးသွန်းဖြိုးလို့ရွာ” ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲနှစ်ခုပဲရိုက်ဖြစ်ပါသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေလက်ခံထားတာ သိပ်မရှိပါဘူး။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကာကြီးတွေလက်ခံထားတာတွေပဲရှိပါတယ်”လို့ ပြောပြ ခဲ့ပါတယ်။
မကြာခင်ကျင်းပပြုလုပ်တော့မယ့် အကယ်ဒမီပေးပွဲနဲ့ပတ်သက် ပြီးတော့လည်း အခုလိုပြောပါတယ်။ ”အကယ်ဒမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတော့ မရှိပါဘူး။ အကယ်ဒမီမှန်းလို့ရလောက်တဲ့ဇာတ်ကားတွေလည်း ရုံမတင်ရသေးပါဘူး။ ဘယ်သူတွေရစေချင်လဲဆိုတော့ ရသင့်ရထိုက်တဲ့သူတွေကို ရစေချင်တယ်။ ကျွန်တော်အကယ်ဒမီပွဲကိုတော့ သွားဖြစ်မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့စီနီယာတွေ နောက်ဂျူနီယာတွေကိုပဲ လက်ခုပ်တီးထားဖို့ပဲသွား ဖြစ်မှာပါ”လို့ ဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။